Ronono - Howling Pixel
Ny ronono dia sakafo ranoka miloko fotsy amboarin'ny biby mampinono vavy. Ny ronono dia vokarin'ny fandranoka ao anatin'ny nono.
Ny ronono dia ranoka fotsy, ny misy ao anatiny dia mety samihafa kely arakaraky ny karazana biby mampinono.
Ny rononon'omby dia manana tahandanja 1,032. Haro fiharo ary mitsingilahila. Ny arakevitry ny rano dia fito ambin'ny valopolo isan-jato. Ny sisan'izay dia tavy (3,5-4,5%) ary tahantombo hafa toy ny gliokôzy, lipida, prôtida ary otrikanina, miaraka amina tahantombo mineraly toy ny kalsiôma, pôtasiôma, manganeza, kilaoro...
Ny pH dia somary marikivy (6,4 hatramin'ny 6,8 ho an'ny rononon'omby) mahery kelin'ny 7 ny pH an'ny rononon'olombelona (7,0-7,5). Mihamarikivy ny ronono rehefa mijanona elaela, satria lasa mivadika ho asidra laktika ny laktôzy.
Ambohidrapeto dia kaominina malagasy ao amin'ny distrikan'i Atsimondrano, Faritanin'i Antananarivo. Ny isam-poniny dia 27310 araka ny faminavinana natao tamin'ny taona 2000. Ny kaodin-kaominina dia 11705 ary ny kaodin-distrika dia 117
Ambohitrimanjaka dia kaominina malagasy ao amin'ny distrikan'i Ambohidratrimo, Faritanin'i Antananarivo. Ny isam-poniny dia 22007 araka ny faminavinana natao tamin'ny taona 2000. Ny kaodin-kaominina dia 10313 ary ny kaodin-distrika dia 103
Ampangabe dia kaominina malagasy ao amin'ny distrikan'i Ambohidratrimo, Faritanin'i Antananarivo. Ny isam-poniny dia 8235 araka ny faminavinana natao tamin'ny taona 2000. Ny kaodin-kaominina dia 10319 ary ny kaodin-distrika dia 103
Ampanotokana dia kaominina malagasy ao amin'ny distrikan'i Ambohidratrimo, Faritanin'i Antananarivo. Ny isam-poniny dia 13291 araka ny faminavinana natao tamin'ny taona 2000. Ny kaodin-kaominina dia 10321 ary ny kaodin-distrika dia 103
Amparafaravola dia kaominina malagasy ao amin'ny distrikan'i Amparafaravola, Faritanin'i Toamasina. Ny isam-poniny dia 46545 araka ny faminavinana natao tamin'ny taona 2000. Ny kaodin-kaominina dia 31201 ary ny kaodin-distrika dia 312
Androhibe dia kaominina malagasy ao amin'ny distrikan'i Atsimondrano, Faritanin'i Antananarivo. Ny isam-poniny dia 14750 araka ny faminavinana natao tamin'ny taona 2000. Ny kaodin-kaominina dia 11725 ary ny kaodin-distrika dia 117
Anjanadoria dia kaominina malagasy ao amin'ny distrikan'i Ambohidratrimo, Faritanin'i Antananarivo. Ny isam-poniny dia 5061 araka ny faminavinana natao tamin'ny taona 2000. Ny kaodin-kaominina dia 10341 ary ny kaodin-distrika dia 103
Anjoma Betoho dia kaominina malagasy ao amin'ny distrikan'i Manjakandriana, Faritanin'i Antananarivo. Ny isam-poniny dia 3164 araka ny faminavinana natao tamin'ny taona 2000. Ny kaodin-kaominina dia 10633 ary ny kaodin-distrika dia 106
18.400000°S 47.866670°E﻿ / -18.400000; 47.866670
Anjozorobe dia kaominina malagasy ao amin'ny distrikan'i Anjozorobe, Faritanin'i Antananarivo. Ny isam-poniny dia 19192 araka ny faminavinana natao tamin'ny taona 2000. Ny kaodin-kaominina dia 10701 ary ny kaodin-distrika dia 107
Antanetikely dia kaominina malagasy ao amin'ny distrikan'i Antananarivo Atsimondrano, Faritanin'i Antananarivo. Ny isam-poniny dia 12350 araka ny faminavinana natao tamin'ny taona 2000. Ny kaodin-kaominina dia 11723 ary ny kaodin-distrika dia 117
19.865860°S 47.033330°E﻿ / -19.865860; 47.033330
Antsirabe dia tanana fahatelo lehibe ao Madagasikara raha ny isan'ny mponina no jerena.
Iarinarivo dia kaominina malagasy ao amin'ny distrikan'i Ambohidratrimo, Faritanin'i Antananarivo. Ny isam-poniny dia 6624 araka ny faminavinana natao tamin'ny taona 2000. Ny kaodin-kaominina dia 10309 ary ny kaodin-distrika dia 103
Ny laktôzy (avy amin'ny teny frantsay lactose, avy amin'ny fiteny grika) dia gliosida anaty ronono (de 20 à 80g•L−1). Ny dikan'ny laktôzy amin'ny fiteny grika dia « siramamin-dronono »
Mananjara dia kaominina malagasy ao amin'ny distrikan'i Ambohidratrimo, Faritanin'i Antananarivo. Ny isam-poniny dia 2825 araka ny faminavinana natao tamin'ny taona 2000. Ny kaodin-kaominina dia 10323 ary ny kaodin-distrika dia 103
15.857440°S 48.828240°E﻿ / -15.857440; 48.828240
Mandritsara dia kaominina malagasy ao amin'ny distrikan'i Betafo, Faritanin'i Antananarivo. Ny isam-poniny dia 13200 araka ny faminavinana natao tamin'ny taona 2000. Ny kaodin-kaominina dia 10908 ary ny kaodin-distrika dia 109
18.916670°S 47.800000°E﻿ / -18.916670; 47.800000
Manjakandriana dia kaominina malagasy ao amin'ny distrikan'i Manjakandriana, Faritanin'i Antananarivo. Ny isam-poniny dia 20718 araka ny faminavinana natao tamin'ny taona 2000. Ny kaodin-kaominina dia 10601 ary ny kaodin-distrika dia 106
Merimandroso dia kaominina malagasy ao amin'ny distrikan'i Ambohidratrimo, Faritanin'i Antananarivo. Ny isam-poniny dia 10229 araka ny faminavinana natao tamin'ny taona 2000. Ny kaodin-kaominina dia 10317 ary ny kaodin-distrika dia 103
Mofo atody : mofo
Zavatra ilaina : atody 4, siramamy 8 sotro (c.à.soupe), tsongo-tsira 2, farine 1/2kg, lévure 1 sachet pour 1/2kg farine, ronono kely.Kapohina miaraka ny atody, siramamy, sira. Rehefa avy eo de arotsakindry ao ny farine efa nafangaro mialoha tamin'ny levure. arotsakindry @ zay ny ronono kelikely fotsiny fa manjary matsora lotra ny pate.Endasindry aminy zay, mila menaka betsabetsaka le izy, atao mafana be. Bataina aloha rehefa handrotsaka azy de rehefa tafiditra daholo dia averina @ fatana. Tandremo sao may a.
Dia mazotoa e.